EEDO(AAYO): AJIYOOW ALLE KA BAQ OO AXDIGEENII ADKEE !!!!!
Muddo laga joogo qarniyaal badan ayaa waxaa heshiiyey Ajiga iyo Eedada(Aayo). Waxay dhigteen ballan adag iyo axdi oo qofkii ka baxaa uu muteysanayo dhibaato iyo halaag aan hore dunida uga dhicin!.
Haddaba Inta aanan soo bandhigin sirta iyo ballanta ay wada galeen Eedo(Aayo) iyo Ajiga waxaan jeclaan lahaa in aan wax yar ka taabto dhibaatada maanta haysata carruurta Soomaaliyeed guud ahaan iyo kuwa qawmiyadaha la takooro gaar ahaan.
Carruurtu waxay u baahan yihiin barbaarin, kool koolin iyo in wixii ay rabaan oo la awoodi karo loo sameeyo ama si wanaagsan loo qanciyo. Waxaa haboon in carruurta lala sheekeysto oo cabashadooda la tixgeliyo. Soomaalida waxaa u caada ah in ilmaha yar laga eryo meelaha shirarka ama dadka waaweyni ku sheekeysanayaan. Waa haboon tahay in laga qariyo waxyaabaha ilmaha yar maskaxdiisu aysan qaadan karin iyo waxa lagala xishoonayo inay maqlaan ama arkaan. Laakiin ma haboona in laga eryo ilmaha sheeko iska caadi ah ama shir ay carruurta yari ka korosanayaan waaya aragnimo ama ay dad ku baranayaan. Ogow ilmaha yar waxaa saaran mashiin ka casrisan, kana dheereeya kan dadka waaweyn. Haddaba haddaanu isla garanay in ay haboon tahay in carruurta la suubaa salaaxo, MA CARRUURTA SOOMAALIYEED OO DHAN BAA ARRINTAN KA SIMAN MISE CARRUUR GAAR AH BAA U QALANTA?
Waxaa xaqiiqa ah in sad bursi uu jiro oo carruurta uu AJIGU dhalay loo arko in ay yihiin kuwii Ilaahay doortay, kuwa kalena ay iyaga u shaqeeyaan ama u adeegaan! Waa sifa la mid ah waxyaabaha ay Yuhuudu aaminsan tahay!
Mustaqbal la’aanta iyo mooraal jabka haysata carruurta soomaaliyeed maanta aad bay u badan yihiin. Iyagoo markii horeba aan ku soo korin nolol raaxo leh ayay haddana waxay arkayaan in uusan jirin mustaqbal raaxo leh oo ka horeeya.
1. Noloshii Hore
Noloshan waxaa la socotay Gaajo, Fakhri, Cudur iyo Garaacid. Carruurta ka dhashay qowmiyadaha la yaso waxaa intaa u dheer Guhaad, Aflagaado iyo Niyad jab. Laakiin anshax wanaagsan, tacliin iyo nabad bay haysteen. Daryeel dowli ah baa jirey, laakiin ma jirin sharciyo xuquuqdooda lagu ilaalinayo oo Dawli ah kuwii Diinigana lamaba aqoon.
2. Nolosha Cusub
Dhib badan oo xaga koriimada ah oo laga soo maray carruurta ka dib ayaa mustaqbalkey higsanayeen uu noqday: Mukhaadaraad, Aqoon la’aan iyo Damiinimo, Hoy iyo Harsasha la’aan, Jiri iyo Mooryaanimo, Islahadal iyo Buufis, Isbiimeyn iyo Qar iska tuur, iyo Dagaal joogta ah. Waxaa adeegsada Dagaal Oogayaasha(SHAR AJI) maangaabka ah oo carruurtoodii dibadaha geystay ama ay raaxo ku nool yihiin. Waxaa carruurtan sida qashinka layska tuuraa marka ay dhaawacmaan ama dhintaan, iyadoo ay arrintani dhibayso oo keliya waalidkii dhalay oo aan ka fiirsan BAROOR DIIQDA IYO WEER ISKU XIDHKA KAABA QABIILKA CAADA QAATAHA AH!
Haddaba iyadoo Eebe iyo Suubanuhu(scw) noo sheegeen sida wanaagsan ee loo barbaariyo carruurta iyo inaan la garaacin carruurta iyo dumarka ayaa waxaa la yaab leh sida ay u kala durugsan yihiin waxaan samaynano iyo waxaanu rumeysan nahay.
Akhristayaal bal xusuusta garaacida iyo Silic maryaadka ay EEDO(AAYO) Soomaaliyeed ku samayso carruurta Agoonta, Rajada, iyo kuwa hooyadood la furay ee loo keeno. Aayadu naxariis ma leh, ma xasuusataa heestii: “EEDAAN LA YAABEE ARXANKEEDU DARANAA…………..!!!!”
Carruurta EEDO ama AAYO u soo gacan gashaa dhibaatooyin badan oo Nafsiyan iyo Jismiyan ah bay mutaan. Waxyaabaha ay EEEDADU ku sameyso carruurta DHOOHANIHII DHALAY ku aaminay waxaa ka mid ah:
CUNO U DIID, CAY IYO XAQIRAAD JOOGTA AH, IL KU GUBID, GUHAAD IYO FARUURYA QANIINSI haddii dad kale la joogaan, CUNO XUN OO BAARTAY IYO LUF-LUF SIIN, UGA HIILIN carruurta kale ee ay walaalaha yihiin ee ay dhashay, GACMA KA GUBID, BABIS IYO BILQABAD KULUL LA DHICID, CAYRIS JOOGTA AH inta NACASKII dhalay maqan yahay, SHAQO CULUS OON LOOGA TUREYN-halka kuway dhashay raaxeysanayaan, BOOYAASO IYO MADIIDIN UGA DHIGD KUWEEDA, DHUL IYO SHAMIITO SEEXIS, KU DIRDIRID AABIHII DHALAY-Isna ma wareeysto mana ogaadee ul buu dabada u qabtaa!!!!
Haddaba akhristow intaasoo dhibaata ah ilmaha yar ee la soo mariyaa, maxaa laga filayaa inay Niyadiisa, Dadnimadiisa iyo Mustaqbalkiisu ay noqdaan!
Dhibaatooyinkaas la yaabka leh ee ay AAYADU ku samaynaso ilmaha aysan dhalin laakiin la dhashay ama waalid u ah ilmaheeda waxaa ka badan kana daran dhibaatooyinka uu AJIGU ku sameynayo carruurta u dhalatay QAWMIYADAHA LA TAKOORO! Ilmaha yar ee ku soo koraa Midab takoorka iyo Jinsi takoorka dhibaatooyinkaas aanu soo sheegnay oo dhan kama haraan, halka ilmaha aan la takoorin uu markuu weynaado uu ka sheekeeyo oo keliya silicii uu ku soo barbaaray. Laakiin carruurta qowmiyada la yaso waxay dhashaan iyagoo la leeyahay MIDGAAN, MADHIBAAN, YIBIR, JAREER iwm waxayna ku weynaadaan iyagoo weli loogu yeedhayo magacyadaas!. Wuxuu ilmahaa yari bulshada dhexdeeda ka noqdaa TUKE BAAL CAD oo uusan xataa heli Karin hadhow NIN AMA NAAG GUURSADA/TA.
AJIGA iyo AAYADU waxay isaga mid yihiin xaga Dhaqanka, Takoorida, Afxumada iyo Cadaadiska iwm, waxayna ku ballameen in aysan ISKU AXDI FURIN oo ay adkeeyaan xirriirka ka dhexeeya. Waayo haddii xirriirku go’o ama xumaado oo ay hagaajiyaan dhaqankooda waxaa dhacaysa in carruurta loo naxariisto oo la tixgeliyo xuquuqdooda! Haddii taasi dhacdana CARRUURTA MADHIBAANKA, MIDGAHA IYO JAREERTA ayaa la tixgelinayaa oo bulshada ka mid noqonaysa. OGOW, noloshu gurigey ka soo bilaabataa, oo haddii qoysaska Soomaaliyeed ay baraan carruurtooda Is xaqdhowr, Is tixgelin, Is walaaleysi iyo Sinaan waxay ku barbaarayaan dhaqan wanaagsan iyo inuu u arko ilmaha yar ee Ajiga ahi in carruurta Madhibaanka ama Jareertu LA SIMAN YIHIIN OO UUSAN WAXBA DHEEREYN!
Faldan akhri sheekadan la yaabka leh ee ka dhex dhacday Macallimad iyo Ardaygeedii. WAXAY NA BARASAA SHEEKADANI HADBA HEERKA UU GAARI KARO MOORALKA ILMAHA YAR MARKA LOO EEGO XAALADAHA KALA DUWAN EE LA SOO DERSA NOLOSHIISA.
Macallinkee sameyn kara arrintan in ay ilmaha cay iyo ul dabada u qabtaan mooyee!!
Ajigee sameyn kara arrintan oo kale in ay ilmaha Madhibaanka u arkaan nijaas mooyee!!
Sheeko la yaab leh ayaa ka dhacday waa hore iskool hoose oo ay dhigtaan ardayda yaryar. Magaca macallimada waxaa la oran jirey Mrs. Thompson. Iyadoo hor taagan fasalka 5-aad ee ay macallimada u ahayd maalintii u horeysay ee sanad dugsiyeedka ayay carruurtii intay dhamaan isha la raacday ku tidhi ogaada inaan dhamaantiin idin jeclahay. Laakiin jacaylka ay macallimadu sheegayso muusan dareemin wiil yar oo xaga ugu horeysa fadhiya oo magaciisa la yiraahdo Teddy Stoddard.
Mrs. Thompson waxay macallimad u ahayd Teddy sandkii kan ka horeeyey waxayn ogtahay inuusan carruurta kale si wanaagsan ula cayaarin. Teddy dharkiisu wasakh badan buu lahaa wuuna jeexjeexnaa, soomana qubeysan jirin. Teddy wuxuu ahaa wiil yar oon dadka aan farax gelin. Mrs. Thompson waxay ku raaxaysan jirtay inay qallin cas waraaqihiisa dusha kaga qorto iskutalaab iyo “ F” weyn oo u dhiganta EBER “0” baad keentay, Damiin baad tahay.
Iskoolka ay Macallimadani ka dhigi jirtay ayaa waxaa sharcigiisa ka mid ahaa in macallinku uu faylka ardayga dib u raaco ilaa markii uu iskoolka bilaabay. Macallimadu faylkii Teddy nacayb awgii waxay ka dhigtay kan ugu danbeeya ee ay eegi doonto. Laakiin markii ay eegtay faylkiisii amakaag iyo af kala qaad baa ka soo haray.
Macallinkii Teddy u dhigayey fasalkii koowaad ayaa wuxuu ku qoray faylkiisa: “ Waa wiil aad u akhlaaq wacan dadkana farax geliya shaqadiisa gurigana si wanaagsan buu u soo sameeyaa una soo celiyaa”
Macallinkiisii fasalka labaadna wuxuu ku qoray: “ Teddy waa arday aad u wacan, saaxiibadiisna ay jecel yihiin, laakiin murugo ayaa la soo deristay maadaama ay hooyadii tacbaan tahay nolosha guriguna aysan fiicnayn” Macallinkii fasalkiisa saddexaadna wuxuu qoray: “ dhimashada hooyadii waxay ku reebtay murugo weyn. Inkastoo uu isku dayayo inuu waxbarto haddana aabihii ma daneeyo oo waxba uma qabto, haddii aan wax laga qaban nolosha ilmahan yar si dhaqso ah mustaqbalkiisa mugdi ayaa ku jira”.
Macallinkiisii fasalka afraadna wuxuu qoray: “ Teddy dan iyo heelo kama galo waxbarashada, saaxiibo badan ma leh, fasalka gudihiisa ayuu ku seexdaa”
Markii ay Mrs. Thompson u soo baxday xaqiiqdii aad ayay isula yaabtay isuna dhibsatay cadaadiska ay wiilkaa ku hayn jirtay. Waxaaba intaa uga sii darnaatay markii ay aragtay hadiyadihii quruxda badnaa ee sida wanaagsan loo soo duubay ee ay carruurta oo dhan u keeneen marka laga reebo Teddy. Teddy wuxuu u keenay macallimadiisii jijin yar oo qalqaloocda oo ilkaheedu qaar ka maqan yihiin iyo dhalo barfuun ku jiro oo nus ah uuna kusoo duubay baakad yar oo fool xun. Carruurta kalena baco dhaldhalaalaya oo quxur badan ayay hadiyadahooda ku soo duubeen taasoo ku keliftay in Mrs. Thompson ay aad u dhibsato markii ay alaabtii Teddy keenay ku dhexfurasay carruurta dhexdeeda. Markii ay furtay baa carruurtii qosol naftu ka baxday markii ay arkeen waxa laga soo saaray baakada foosha xun. Waxaase carruurtii uu qosolku ku qaboobay markii ay Mrs. Thompson tidhi maxaa ka qurux badan Jijintan! Barfuunkiina ay isku buufisay!
Markii arrintaasi dhacday Teddy Stoddard wuxuu ku hadhay iskoolka wuxuuna ilaa maanta sugayey macallimadii wuxuuna ku yidhi, “ Mrs. Thompson, Maanta sidii hooyaday markay barfuunka isku shubto u soo carfi jirtay baad u soo carfasaa”
Markii uu ka tegey bay Mrs. Thompson oohin afka furatay. Isla maalintaa waxay go’aan ku gaadhay inay dib danbe u dhigin xisaabta iyo farbarashada(Reading/Writing), waxayna go’aansatay inay carruurta dhab ahaan wax u barto oo xaalkooda hoose ogaato.
Mrs. Thompson si khaas ah ayay u daryeeli jirtay Teddy marba marka ka danbeeya ayuu qalbigiisii dhintay iyo fahamkiisii soo noqonayey. Markii ay amaantaba waxbarashadiisa iyo xifdigiisu wuu labanlaabmayey ilaa Teddy ka noqday wiilka ugu wanaagsan uguna xariifsan fasalkeedii. Inkastoy markii iskoolku bilaabmayey ay been ahayd inay ardaydoo dhan wada jeceshahay laakiin markan si dhab ah bay u jeclaatay Teddy.
Sanad ka dib warqad bay ka heshay Teddy. Warqada waxaa ku qornaa in ay tahay macallimadii ugu wanaagsanayd inta macallin weligii wax u dhigtay noloshiisa. Lix sano ayaa ka soo wareegtay markii ay heshay warqadii labaad. Wuxuuna u sheegay inuu dhameeyey Dugsigii sare, kaalinta Saddexaadna uu galay ayna tahay macallimadii ugu wanaagsanayd inta macallin weligii wax u dhigtay noloshiisa.
Afar sano kadib waxay ka heshay warqad kale, waxaana ku qornaa inuu goor dhow ka qalin jebin doono jaamacada oo uu galay kaalinta ugu sareysa inkastoo buu yidhi mararka qaarkood noloshu ku adkeyd oo dhibaatooyin la soo derseen haddana kamaan tegin waxbarashadii. Wuxuuna mar kale yidhi inay tahay macallimadii ugu wanaagsanayd inta macallin weligii wax u dhigtay noloshiisa.
Afar sanoo kale ka dib haddana warqad kalaa timid. Warqadu waxay leedahay inuu helay digriiga Bajolaarta laakiin uu doonayo inuu sii wado waxbarashadiisa. Wuxuuna mar kale yidhi inay tahay macallimadii ugu wanaagsanayd inta macallin weligii wax u dhigtay noloshiisa. Magaciisii magac kaloo dheeraad ah baa ku kordhay oo shahaado kaluu qaatay, waxaana warqada ku saxiixnaa magaca Theodore F. Stoddard, MD.
Waraaquhu ma joogsadaan, haddana waa mid kaloo socota. Waxaa ku qoran inuu gabadh ay wada socdeen ka helay oo uu doonayo inuu guursado. Waxaa kaloo ku qoran in aabihii uu laba sano ka hor geeriyooday uuna hadda RAJAY yahay. Maadaama uusan lahayn qoys u dhisa gabadha, wuxuu ka codsaday in Mrs. Thompson ay agtiisa fariisato xilliga aroosku dhacayo oo ay booskii hooyadii metesho.
Mrs. Thompson oo aad ugu faraxsan ayaa arooskii timid waxayna horay u soo gashatay jijintii xumayd ee uu hadiyada ugu keenay, waxayna isku soo buufisay barfuunkii uu siiyey ee hooyadiisii dhimatay lahayd. Barfuunkan xusuustiisa ayaa ku dheer waayo hooyadii waxay isku buufisay markii ay ifka ka tegesay!. Markaa caraftiisa ayaa ku dheer oo uu xasuusan yahay.
Farxad aad u weyn bay labadoodiiba arooskii ku damaashaadeen.
Dr. Stoddard ayaa Mrs. Thompson hoos ugu yidhi; “ aad baan kaaga mahad celinayaa Mrs. Thompson-ey sida aad iila dadaashay, ii dhiiri gelisay iina tustay inaan noqon karo qof mustaqbal sameysan kara”
Mrs. Thompson ayaa ilmeysay iyadoo leh Teddy-yow anigu waxba kuma tarine adigaa wax istaray. Adigaan kaa faaiideystay oo itusay inaan hagaajin karo mustaqbalka ubadka yar-yar. Adiga hortaa maan aqoon sida dadka wax loo baro, adigaa ibaray Teddyow!